अप्पर इङ्गवा जलविद्युत आयोजनामा बैंक अफ काठमाण्डूको एकल लगानी Bizshala -
सेयर बजारमा आगामी रणनीति कस्तो हुनुपर्ला ? कुन सेक्टरमा आकर्षण बढ्ला ?
मैलुङ खोल जलविद्युतको आईपीओ पहिलो दिनै १० गुणा बढीले ओभरसब्सक्राइब्ड
मौद्रिक नीति रोकेको छैन, विगतलाई गाली गर्ने श्वेतपत्र ल्याउँदिन : अर्थमन्त्री
आगामी साताबाट मनकामना स्मार्ट लघुवित्तको सेयर कारोबारमा आउने
काठमाण्डौ। बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेड र इङ्गवा जलविद्युत लिमिटेडबीच अप्पर इङ्गवा जलविद्युत आयोजनामा कर्जा प्रवाह गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भएको छ। यससम्बन्धी सम्झौतापत्रमा बैंक अफ काठमाण्ड र इङ्वा जलविद्युतले गत जेठ ३० गते हस्ताक्षर गरेका हुन्।
९.७ मेगावट उत्पादन क्षमता रहेका अप्पर इङ्गवा जलविद्युत आयोजनाको अनुमानित खर्च रु १ अर्ब ९५ करोड रहेको छ। इङ्गवा जलविद्युत लिमिटेडले ताप्लेजुङ र पाँचथर जिल्लाको याङबाराक र सिदिङबा गाउँपालिकामा उक्त जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य गरिरहेको छ। उक्त आयोजनामा बैंक अफ काठमाण्डूको एकल लगानी रहने छ।
आयोजनामा कुल लागतको ७५% बैंक कर्जा वापतको लगानी रहनेछ भने बाँकी २५% इङ्गवा जलविद्युत लिमिटेडको लगानी रहनेछ। आयोजना पूरा भएपछि उत्पादित विद्युत अमरपुर सवस्टेसनमा जोडिनेछ। सबस्टेसनसम्मको आवश्यक १६ किलोमिटर लामो ३३ केभी प्रसारण लाइन कम्पनी आफैले निर्माण गर्नेछ। यसका साथै यस कर्जा लगानीपश्चात् यस जलविद्युत आयोजना निर्माणमा सहयोग पुग्ने र समयसीमामा नै आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न हुने विश्वास बैंकले लिएको छ।
बैंक अफ काठमाण्डूको ऊर्जा क्षेत्रहरु (सौर्य तथा जलविद्युत) को विकासका लागि बैंकिङ क्षेत्रबाट लगानी गर्ने पहिलो बैंक रहेको तथा अग्रणी स्थानमा रही बैंकले विभिन्न ३७ वटा परियोजनामा लगानी गरिसकेको छ।
हालसम्म बैंक अफ काठमाण्डूले ९० शाखा कार्यालय, ७८ एटीएम र १० एक्स्टेन्सन काउन्टरबाट आफ्ना ग्राहकलाई उत्कृष्ट बैंकिङ सुविधा प्रदान गर्दै आइरहेको छ।
मध्यभोटेकोशीको आईपीओमा आवेदन दिने म्याद थपिने, सर्वसाधारणका लागि कहिले आउला ?
अबदेखि ग्रिन वे एपले आइएमई पेमार्फत भुक्तानी सेवा प्रदान गर्ने
इमर्जिङ नेपालले रु. ५.५५ करोडको आईपीओ जारी गर्ने, धितोपत्र बोर्डसँग माग्यो अनुमति
आईएमई जनरल इन्स्योरेन्सद्वारा संस्थापक र सर्वसाधारणको सेयर स्वामित्व परिमार्जन
नेप्सेमा दोहोरो अंकको करेक्सन, आगामी दिनमा बजार बढ्ने यस्ता छन् आधार
दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका ग्राहकका परिवारलाई मेगा बैंकबाट रु. ७ लाख हस्तान्तरण
अबदेखि ग्रिन वे एपले आइएमई पेमार्फत भुक्तानी सेवा प्रदान
दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका ग्राहकका परिवारलाई मेगा बैंकबाट रु.
काठमाण्डौ । दुर्घटनामा परी असामयिक निधन भएका ग्राहकका परिवारलाई...
हंगेरी सरकारद्वारा नेपाललाई स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण
काठमाण्डौ । हंगेरी सरकारले नेपाल सरकारलाई कोभिडविरुद्ध लड्न...
कामना सेवा र ह्वाइट लोटस मोटर्सबीच सहकार्य, ग्राहकलाई सहज
काठमाण्डौ । कामना सेवा विकास बैंक र ह्वाइट लोटस मोटर्सबीच...
फोनपेले ल्यायो ‘आम्मामामा क्यूआरमा उपहार, दिनदिनै १ लाख’
काठमाण्डौ । फोनपे पेमेन्ट सर्विस लिमिटेडले आफ्ना मर्चेन्टहरुलाई...
अब प्रभु पेबाटै लस्कर फुड्समा भुक्तानी गर्न सकिने
काठमाण्डौ । प्रभु पे डिजिटल वालेट र अनलाइन फुड डेलिभरि प्लेटफर्म...
नेपाल उद्योग परिसंघमा ७ जना उपाध्यक्ष चयन
काठमाण्डौ । नेपाल उद्योग परिसंघको विधानअनुसार मंगलबार ७ जना...
अब चिरायु राष्ट्रिय अस्पतालमा अनलाइनबाटै अपोइन्टमेन्ट लिन
काठमाण्डौ । चिरायु राष्ट्रिय अस्पतालमा अनलाइनबाट अपोइन्टमेन्ट...